अब बिदाको दिनमा पनि बजार अनुगमन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अब बिदाको दिनमा पनि बजार अनुगमन
प्रकाशित मिति १६ आश्विन २०७६, बिहीबार १२:२० लेखक Sabita Roka
काठमाडौं । सरकारले बिदाको दिनमा पनि बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत नियमित बजार अनुगमन हुने जानकारी दिँदै कुनै समस्या भएमा, ठगी भएको र कानूनविपरीतको कार्य भए प्रहरीलाई खबर गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले यात्रुलाई सहयोगका लागि सहायताकक्ष बनाएर सेवा दिँदै आएको समेत बताए । केही गुनासो भएमा देशैभरि प्रहरीको १००, उपत्यकाको १०३, सशस्त्र प्रहरीको १११४ नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।
आपसी सद्भाव, मित्रता अभिवृद्धि गर्ने गरी सांस्कृतिक मान्यताअनुसार चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको सूचनामार्फत जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी, थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई आम उपभोक्ताको सेवा पुर्याउन अनुरोध गरेको छ । अनुचित फाइदा लिने मनसायले ठगी गर्ने, कानून मिच्ने, गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
दिपावली र छठका अवसरमा प्रयोग हुने पटाका, आतिसबाजीजस्ता विष्फोटक पदार्थका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुग्ने र चोटपटक तथा आगलागीसमेत हुने भएकाले यस्ता विष्फोटक पदार्थको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै बेचबिखन र प्रयोग गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बन्न चार करोड ?
काठमाडौं । यति एयरलाइन्स र गोकर्ण रिसोर्टसहित विभिन्न व्यापारिक निकायका मालिक आङछिरिङ शेर्पाले लुम्विनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा आफ्ना…
जसको नाममा पैसा आयो उसैलाई पत्तो छैन !
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’…
विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको व्यापार
काठमाडौं । गुणस्तरीय शिक्षा दिन कमजोर भएको आरोप खेपेका नेपालका विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धनको व्यापारमा भने तीव्र देखिएका छन् ।
सिसडोल ल्याण्डफिल साइट फेरि बन्द, उपत्यकाको फोहोर कहाँ फाल्ने ?
काठमाडौँ । स्थानीयले सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर ढुवानी बन्द गरेका छन् । सिसडोल नजिक कागती गाउमा एकसातादेखि बिग्रिएको ट्रान्समिटर…
यी हाइप्रोफाइल व्यक्तिको जेलमा हत्या योजना
काठमाडौं । जेलमा रहेका गुण्डा नाइके समिरमान बस्नेतले आफ्नी पत्नी माया शेरचनमार्फत एनजिओकर्मी तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितको हत्या योजना…
देशभरि मै एउटै प्रदूषण जाँच केन्द्र !
काठमाडौं । देशभर चल्ने सवारी साधनमध्ये ज्यादै कमको मात्रै प्रदूषणको जाँच हुने गरेको पाइएको छ । एकातिर देशको एक…
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 16 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 12 views
शिवरात्रिमा नागाबाबा : महिलालाई पशुपतिनाथ गइनसक्नु ! 8 views
“मलाई नेतृत्वमा आउन देशभरकै व्यावसायीहरुकै तिव्र दवाव छ “7views
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? लिनुहोस् टीप्स!6views
ब्लु फिल्म खेलेर जमेका नेपाली युवतीहरू5views